ကျပ်ငွေ တန်ဖိုးတက်ခြင်း(သို့)ဒေါ်လာဈေးကျခြင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Business & Economics » ကျပ်ငွေ တန်ဖိုးတက်ခြင်း(သို့)ဒေါ်လာဈေးကျခြင်း
တစ်ဒေါ်လာကို ကျပ် ခြောက်ရာကျော်လောက်ထိ ဖြစ်လာတော့ အတော် လှုပ်လှုပ်ရှားရှား ဖြစ်နေကြတယ်။အယူအဆအမျိုးမျိုးနဲ့ ပြောနေတာတွေကိုလဲ ကြားနေတာပေါ့။ခင်ဗျားတို့တော့ ဘယ်လိုဖြစ်စေချင်တယ် မသိဘူးပေါ့နော်။ကျွန်တော် စဉ်းစားမိတာ ပြောကြည့်အုံးမယ် ဝိုင်းဝန်းဝေဖန်ကြပါအုံး။
၁။ လစာပုံမှန် ၅၀၀၀၀.ကျပ် ရတဲ့သူတယောက်ဟာ အရင်ငွေလဲနှုန်း(၁၀၀ဝကျပ်)နဲ့ဆိုရင် ဒေါ်လာ ၅၀ ဘဲရမယ် ။အခုငွေလဲနှုန်း (၆၇ဝကျပ်)နဲ့ဆို ၇၄.၆ ဒေါ်လာလောက်ရသွားပါပြီ။
၂။ ဒေါ်လာ ၅၀ဝတန်laptop ကွန်ပြူတာတလုံး ဝယ်မယ်ဆိုရင် အရင်ကငွေဈေး(၁၀၀ဝကျပ်=၁ဒေါ်လာ)နဲ့ဆို ၅၀၀၀၀ဝ ကျပ် ပေးရပါမယ်။အခုငွေဈေး(၆၇ဝကျပ်=၁ဒေါ်လာ)နဲ့ဆို ၃၃၅၀၀ဝ ကျပ်ဘဲပေးရတော့မယ်။ ၁၆၅၀ဝကျပ်တောင် သက်သာသွားပြီ။တကယ်လို့ ၁ဒေါ်လာ=၅၀ဝကျပ် ဖြစ်သွာမယ်ဆိုရင် ၂၅၀၀၀ဝကျပ် သက်သာသွားပြီ ။အရင်က တစ်လုံးရမဲ့ဟာ အခုဆို နှစ်လုံးရတော့မယ်လေ။
၃။ဒေါ်လာဈေးကျလို့ ငါး ပုဇွန်တွေ နိုင်ငံခြား မပို့တော့ .ပဲတွေ အိတ်စပို့ မလုပ်တော့ ပြည်တွင်းမှာ ပိုလျှံ ပေါများလာတော့ စားသုံးသူတွေ ပေါပေါများများ စားကြရတယ်။
ကျန်တဲ့ အကျိုးဆက်တွေ လဲ ရှိအုံးမှာပါ။တခြားသူတွေ ဆွေးနွေးဖို့ စောင့်ပါမယ်။
ဒေါ်လာနဲ. ရောင်းတဲ. ပစ္စည်းတွေက ကျပ်ငွေနဲ.ပဲယူတော.တာ
အစ်ကို ပြောသလို ” ဒေါ်လာ ၅၀ဝတန်laptop ကွန်ပြူတာတလုံး ဝယ်မယ်ဆိုရင် အရင်ကငွေဈေး(၁၀၀ဝကျပ်=၁ဒေါ်လာ)နဲ့ဆို ၅၀၀၀၀ဝ ကျပ် ပေးရပါမယ်။အခုငွေဈေး(၆၇ဝကျပ်=၁ဒေါ်လာ)နဲ့ဆို ၃၃၅၀၀ဝ ကျပ်ဘဲပေးရတော့မယ်။ ၁၆၅၀ဝကျပ်တောင် သက်သာသွားပြီ။တကယ်လို့ ၁ဒေါ်လာ=၅၀ဝကျပ် ဖြစ်သွာမယ်ဆိုရင် ၂၅၀၀၀ဝကျပ် သက်သာသွားပြီ ။အရင်က တစ်လုံးရမဲ့ဟာ အခုဆို နှစ်လုံးရတော့မယ်လေ။”
ကုန်ဈေး နှုန်းတော. ကျမယ် မထင်ပါဘူးဗျာ။
ဖြေးဖြေးတော့ ပြောင်းသွားမယ်ထင်ပါတယ်။ နဂိုထက်စာရင် ကုန်ဈေးနှုန်းတွေ ထပ်မတက် တော့တာ သိသာလာတယ်။ပင်စင်တွေတိုးပေးလိုက်ပေမဲ့ ကုန်ဈေးနှုန်းက သိပ်လိုက် မတက်ဘူးလို့ထင်တာဘဲ။ အရင်ကတော့ လစာတိုးမယ် သတင်းကြားတာနဲ့တင် ကုန်ဈေးနှုန်းက ကြိုတက်နေပြီလေ…း)
မဟုတ်ပါဘူး။ကွန်ပြူတာတစ်လုံးကနေ နှစ်လုံးရတာ ဆင်းရဲသားတွေအတွက်ဘာမှအသုံးမဝင်ပါဘူး။အဓိက ကတော့ဒေါ်လာဈေးဘယ်လောက်ကျပါစေ. ရွှေဈေးထိုးတက်လာတာသတိပြ ုမိပါတယ် ။ငွေရှားပါးလာတယ်၊ အလုပ်အကိုင်မဲ့တွေပေါလာတယ်၊ဒါဟာမကောင်းတဲ့ပြဿနာပါ။ ကိုယ့်နိုင်ငံငွေက အရမ်းတန်ဖိုးရှိလာလို့ဒေါ်လာဈေးကျပီဆိုရင်တော့ နမိတ်ကောင်းပါ။ လူတန်းစားမရွေးပျော်နိုင်ပီပေါ့။ခုဟာက တော့. ဟွန့်ပြောချင်ဘူး. စိတ်ကုန်တယ်
ပြောစေချင်ပါတယ်… မိမိ ထင်မြင်ယူဆချက်တွေကို ဖြန့်ပေးပါ။
ရွှေဈေး ကတော့ ကမ ္ဘာ့ရွှေဈေးနဲ့ ယှဉ်နေတော့ ရုတ်တရက်တော့ တက်နေမှာပါ။
ကွန်ပြူတာဈေးဆိုတာ အိုင်တီနဲ့ နီးစပ်တဲ့သူတွေ အတွက် ဥပမာပေးတာပါ။သာမန်လူ တွေအတွက်တော့ စားအုန်ဆီဈေးနဲ့ပြောပြရင်နားလည်မှာပေါ့။
ဘာကိုဆိုလိုချင်တာလဲ။ တိတိကျကျလေးပြောပါ။ ရွှီးနေတာတွေများနေလို့။ ဝါးတားတားနဲ့။
အေးဗျ… ကျွန်တော်တို့ လဲ ဝေဝါးဝါးနဲ့ ပြောနေကြရတာပါ။
ဒါကြောင့် သိတဲ့ တတ်တဲ့ လူတွေ ပြောပေးပါလို့ပါ။
သိပ်ပြီးရှင်းအောင် မပြောတတ်တော့ ရွှီးနေသလိုဖြစ်သွားတာ ခွင့်လွှတ်ပါ။
ဥပမာ-ခြောက်သိန်းတန်လက်တော့ကို ဒေါ်လာ၆၀ဝ (၁၀၀ဝဈေး)ဆိုရင်
ဒီကနေ့ ဒေါ်လာဈေးက ၇၀ဝထားပါတော့
ဒေါ်လာဈေးနဲ့လို့ပြောပေမယ့် ဈေးဖြတ်တာက မြန်မာကျပ်ငွေနဲ့ပဲသတ်မှတ်တာ (ကိုယ်တိုင်ကြုံရသလောက်တော့)
အဲဒါကြောင့် ဒေါ်လာဈေးကျချိန်ကို တချို့လူတွေစောင့်နေကြတာ
iPadလေးတစ်လုံးတော့ ဒေါ်လာဈေးတော်တော်ကျရင် လူကြုံမှာဝယ်ရင်ကောင်းမလား စဉ်းစားနေတာ
အိုး…. နို့ညှာလေး ပြန်ရင် မှာလိုက်လေ….း)
အရင်တုန်းက ကွန်ပျူတာပစ္စည်းရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေက ဝယ်သူလာရင် ပထမဆုံးပြောတာက ဒီနေ့ဒေါ်လာ ပေါက်ဈေး အရ ဆိုရင်လေ……….ဆိုတာက စပြီး ပြောတယ်။
ပစ္စည်းဈေးပဲ တစ်ခါတည်း တန်းပြောတော့တာပဲ………….
ဆိုလိုတာက ဒေါ်လာဈေးနဲ့ ညှိပြီးမရောင်းတော့ဘူးလို့ပြောချင်တာပါ။………….:)
ကောင်းတာပေါ့ဗျာ.. အရင်ကဒေါ်လာကို ဆရာတင်ရတာ..
အခုတော့ ကိုယ့် ပိုက်ဆံ က နေရာရပြီလေ…..း)
ကိုယ့်ပိုက်ဆံတန်ဖိုးရှိ လာတော့ ဈေးဆစ်ဖို့ အားမနာနဲ့။
ကွန်ပျူတာ ပစ္စည်းရောင်းတဲ့ဆိုင်မှာ ဈေးဆစ်လို့ရတယ်လို့ကြားဖူးလို့လား။
အရောင်းဆိုင်တွေက ဒေါ်လာနဲ့မညှိပဲ သူတို့သတ်မှတ်ဈေးအတိုင်းပဲ ရောင်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်
ဒေါ်လာဈေးကျလ ဲဝယ်သူတွေ အတွက် မထူးပါဘူးလို့ပြောချင်တာ………..
ဒါပေမဲ့ ကိုယ်ရတဲ့ လစာ ဒါမှမဟုတ် ဝင်ငွေ ကို ဒေါ်လာနဲ့ တွက်ကြည့်ရင် နဲနဲ စိတ်ချမ်းသာမလား လို့ပါ။ ဒေါ်လာ စား FEC စားတွေ တော့ ကြီုက်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့လေ…။
သူတို့ ကောင်းနေတုန်းက ကျပ်ငွေနဲ့ ရတဲ့ လခစားတွေ ငေးကြည့်ခဲ့ရ တာဘဲ မဟုတ်လား။
ကျပ်ငွေ နဲ့ ရတဲ့ ဝန်ထမ်း ကလူများစုပါ။သူတို့ ရတဲ့ လစာ နဲနဲလေး ပေမဲ့ တန်ဖိုးရှိ လာတယ် ဆိုရင် ပျော်မှာပါ။
ငါး ပုဇွန်တွေ နိုင်ငံခြား မပို့တော့ .ပဲတွေ အိတ်စပို့ မလုပ်တော့ ပြည်တွင်းမှာ ပိုလျှံ ပေါများလာတယ် မလုပ်နဲ့
အဲဒီစက်ရုံက ဝန်ထမ်းတွေ ဘုန်းကြီးကျောင်းက ကျွေးထားမယ်ထင်လို့လား။
အဲဒါတော့ စက်ရုံ ပိုင်ရှင် သူဋ္ဌေးတွေ စဉ်းစား ရမဲ့ကိစ္စ ဘဲ။
စက်ရုံ ရဲ့ အကျိုးအမြတ် တွေ ရတုံးက ဘယ်လို ဝေငှ ခဲ့လဲ?
စက်ရုံဝန်ထမ်းတွေ အတွက် ဥပဒေတွေ ကအကာအကွယ်ပေးလာမှာပါ။
သူဋ္ဌေး က ဘုန်းကြီးကျောင်း လှူထားခဲ့ရင် အဲသည်ကျောင်းက ဘုန်းကြီး ကျွေးမှာပေါ့……း) း)။
စက်ရုံပိုင်ရှင်က နိုင်ငံခြား မပို့ရလို့ အလုပ်သမားတွေ အလုပ် ပြုတ်မှာလည်း ထည့်တွေးဦးနော်။ မိသားစုက ရှိတာလေး ရောင်းပြီး နိုင်ငံခြား ပို့လိုက်ရတဲ့ အလုပ်သမားတွေ ရတဲ့ လခ မကိုက်လို့ ပြန်လာရရင် အိမ်ပျောက်မှာတို့ ဘာတို့ကောပေါ့။ အထည်ချုပ်ကလည်း မကိုက်လို့ ပြန်ပြေးရင် အလုပ်လက်မဲ့ ထပ်တိုးဦးမှာ။ တောင်သူတွေလည်း ကုန်တွေ ဈေးကျ ဝယ်မဲ့သူမရှိ်လို့ ခွက်ခွက်လန်နေတာလည်း ထည့်တွက်ပါဦးနော်။ ပုစွန်ထုတ် မစါးရလို့ လက်တော့ မဝယ်နိုင်လို့ ပြသနာ သိပ်မရှိပေမဲ့ တောင်သူတွေ မကိုက်လို့ ဘာမှ မစိုက်တော့မှ ငတ်ကုန်မှာနော်။ ကဲ …သေသေချာချာ ချက်ကျလက်ကျ ပြောတတ်တဲ့ သဂျီး၊ ဦးကြောင် ဝင်ရောက် ဆွေးနွေးပေးပါဦး။ ကျွန်မကတော့ သိပ်မသိလို့ သိသလောက်ပဲ ပြောတာပါ။
သကြီးတင်ထားတဲ့ ဦးမြင့် ရဲ့ စာတမ်းလေးကို အချိန်ရရင် ဖတ်စေချင်ပါတယ်။
ငါးမွေးတဲ့သူတွေလည်း အော်နေပြီ တစ်ဒေါ်လာ=၉၀ဝကျပ်လောက်တုံးက( Export တန်းဝင် ငါးတစ်ပိသာ=၁၇၀၀-၁၈၀ဝကျပ်လောက်ရတယ်)အခု ၁၄၀၀-၁၅၀ဝကျပ်လောက်ပဲရတော့တယ်—ဒါပေမယ့် ငါးအစာဈေး။အလုပ်သမားစရိတ်။သယ်ယူပို့ဆောင်စရိတ် ကတော့မကျ အရင်အတိုင်း။
ဒီနေ့ဆို ၆၁၅ တဲ့လေ… ဈေးနှုန်းကလည်း ဒေါ်လာနဲ့ဝယ်ရတဲ့ပစ္စည်းတွေဆို ခုချိန်မှာ များများသာ ဝယ်ထားကြတော့နော်။ ရွှေဈေးကတော့ ၉ သိန်းထိ တက်မယ်လို့ ကြားနေရပါတယ်။ ဘယ်လိုတွေဖြစ်လာဦးမလဲ….
မြန်မာငွေဈေးမာလာတော့ SHOPPING ထွက်လို့ အကောင်းဆုံးပေါ့။
ဈေးချပေးဖို့ ပြောစရာအချိန် ယူနေတာပဲ ဖြစ်ပါစေ..မိန်းမတွေရှယ်ယာကိစ္စကြောင့်
တော့ မဟုတ်ပါစေနဲ့ ။ဆန်ဈေးကလေးကို အရင်ပြောကြစို့ ပြည်ပပို့ဖို့မို့လားတော့ မသိ ပါ
ပဲဈေးကျတော့ အားမနာဘူး ၃ ပုံ ၁ ပုံ လောက်ပဲ ပေးဝယ်နေကြတယ် အဲဒါတော့ မတရား
သူတည်းတယောက် ကောင်းရာ ရောက်ဖို့
သူ တယောက်မှာ ပျက်လင့်သည်မှာ
(စာချိုးမှန် မမှန် ပြင် ဖတ်ပေးပါ။)
နောက်တခု က တဖက်ကမ်းပြို တဖက်သောင်ထွန်း တဲ့။
မြန်မာ စာသားနဲ့ စကားပုံ တွေ ပါ။
ဒါပေမဲ့ ခု ဒေါ်လာ ဈေး ကျတာ ဟာ သူဌေး တွေ လဲ ဘာ လုပ်ရမှန်း မသိ သလို၊
ဝန်ထမ်းတွေ လဲ စိတ်သက်သာရာ မရ ပါဘူး။
သေချာ တာ ပြောရ မယ် မြန်မာ ကျပ်ငွေ ကလဲ သေချာတဲ့ ခိုင်မာ မှု မရှိ လို့ ခု လို ဖြစ်တာပါ။
သတ်မှတ်နှုန်း တခုဖြစ်သွားခဲ့မယ်ဆိုရင် အားလုံး အဆင်ပြေသွားမလားလို့…
ဒီနေ့ဒေါ်လှဈေး ပြန်တက်လာပါတယ်
ဒေါ်လာဈေးကျနေပေမဲ့…လဲ ပြည်တွင်းဆိုင်တွေက မြန်မာငွေနဲ ့ပဲ ရောင်းတာ..
ပြီးတော့…ငွေလဲနှုန်းကိုလဲ သူတို ့စိတ်ကြိုက်ပဲ တွက်ပြီး ယူသွားတာပဲဗျ
ကျွန်မတို့တော့ ကိုယ်တိုင်ရောင်းမယ်ဆို ဒီကနေ့ပေါက်ဈေးက
ဟုတ်တယ် ဒီနေ့ဈေးပြန်တတ်ပါတယ် 750လို့ပြောတယ်
တကယ်ဈေးဆက်ကျမယ်ဆိုရင် ကုန်သည်တွေက ဈေးမချဘဲ နေလို့မရပါဘူး။
အရင်ဝယ်ပေမဲ့ နောက်ဝယ်ရင်နောက်ဈေး နဲ့ရောင်းတာပါ။သူမရောင်းလဲ တခြားလူရောင်းမှာပါ။
good ပြောသလို ..သူတည်းတယောက် ကောင်းဘို့ရောက်မှု…ဆိုသလိုပေါ့ ဒေါ်လာစားတွေ သည်းခံသင့်ပါတယ်။
ဒေါ်လာ လဲမစားရ ဝင်ငွေလဲကောင်းကောင်းမရှိသေးတဲ့
ကျွန်တော်တို့ အမိမြေက ပြည်သူတွေကု်ိတော့
ကိုချင်းစား မိတယ် အဲ့ထဲမှာ
အဲဒါတွေအတွက် ကြိုးစား ဖြေရှင်းဘို့ လုပ်နေတဲ့သူတွေ ရှိပါတယ်။
ကျနော်တို့အစိုးရက သူဌေးတွေကို မှီခိုနေရတာပါ သူဌေးတွေကလည်း ဒီအစိုးရကို မှီခိုပြီး တော့ (တစ်နည်းတစ်နည်းတစ်ဖုံ) တိုးတက်လာခဲ့တော့ တစ်ယောက်မျက်နှာတစ်ယောက်ကြည့်ခဲ့ကြတာပါ..ဒါ့
ကြောင့်ကုန်ဈေးနှုန်းက တက်ရန်ပြောစရာမလိုသော်လည်း …ကျရန်တော့ ပြောသူမရှိဖြစ်နေရပါတယ်။
သွန်းကုန်သူဌေးတွေကို ဝိုင်းဝန်းသတိပေးကာ မရရင်တော့ ပညာပြသင့်ပါပြီ လုပ်လိုက်ကြပါစို့ လို့ လူစု
လိုက်ပါရစေ…။ ညီညွတ်သောဒို့ မြန်မာ……အဖြစ် ပြောင်းလဲရင်း အမြတ်ကြီးစားတွေကို တော်လှန်ကာ
မလုပ်နိုင်တဲ့သူတွေ က လုပ်နေတဲ့သူတွေကို အားပေးကြဖို့
– သွန်းကုန်သူဌေးတွေကို ဝိုင်းဝန်းသတိပေးကာ မရရင်တော့ ပညာပြသင့်ပါပြီ
– အမြတ်ကြီးစားတွေကို တော်လှန်ကာ တာဝန်သိကြပါစို့လား
တပြည်လုံးအတွက်ခြုံကြည့်ရင်တော့ လုပ်သာကိုင်သာတဲ့ နှုံးတခုမှာ တည်ငြိမ်နေတာကသာ ပိုကောင်းပါတယ်။
ဒေါ်လာဈေးကျတိုင်း မြန်မာငွေနဲ့ပေးရတဲ့ အခွန်အခ ၊ ကုန်ကျစားရိတ်၊ ထုတ်လုပ်စားရိတ် ၊ ဝန်ထမ်းလစာ – စတာတွေက ဈေးမကျပါဘူး။ ဒါကြောင့် ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းတွေ ခံသာတဲ့နှုံး၊ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းတွေ လည်ပတ်နိုင်တဲ့နှုံး မှာရှိနေသာတာပိုကောင်းပါတယ်။ အကြမ်းအားဖြင့် လူတချို့အမြင်အရတော့ တဒေါ်လာ ၈၀ဝ ကျပ်အထက်မှာ ရှိနေမှ လတ်တလော အဆင်ပြေမှာပါ။
သကြီးရဲ့ post http://myanmargazette.net/63288/business-economy/money-finance
မှာတော့ ဒါတွေပါ ပါတယ်။
ဒေါ်လာဈေးကျလဲ ဘာမှမထူးပါဘူး လူတွေက ဒေါ်လာဈေးကျရင် မြန်မာငွေနဲ့ရောင်းတယ် ဒေါ်လာဈေးတတ်
ရင် ဒေါ်လာနဲ့ရောင်းတယ် ဘာမှမထူးပါဘူးဗျာ…..
စောစောက ငွေဈေးမေးကြည့်တော့ တစ်ရင်းဂစ် ကို ၂၂၆ ကျပ်တဲ့.. သေပြီဆရာ..
အရင်တုန်းကဆို ပိုက်ပိုက်တစ်သိန်းကို ရင်းဂစ် ၃၀ဝလောက်ဘဲကျတယ်.. မိဘတွေဆီလွှဲရတာလည်း ကိုယ့်ဝင်ငွေလေးနဲ့အဆင်ပြေတယ်.. ခုတော့….!!!! နိုင်ငံခြားမှာအလုပ်လုပ်ပြီး မြန်မာပြည်ကို ပြန်ပို ့နေသူတွေတိုင်း အနည်းနဲ ့အများစိတ်ညစ်ကြမှာဘဲ.. မြန်မာပြည်ကုန်ဈေးနှုန်းကလည်း ကြီး.. ပို ့တဲ့ငွေလေးကလည်း မစို ့မပို ့… ဘာတွေဖြစ်လာဦးမယ်မသိသေးဘူး.. ဟူးးးးးးးးးးးး
ကုန်ပစ္စည်း ဈေးနှုန်း ကဖို့က ဒေါ်လာဈေးနဲ့ တိုက်ရိုက်ပတ်သက်ပုံမရပါဘူး…။ လူသုံးကုန်ပစ္စည်း အများစုနဲ့ စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းအများစုနဲ့ တိုက်ရိုက်ထိတွေ့နေတဲ့ ဘတ်နဲ့ ယွန် ဈေးကျမှ ဖြစ်မယ်နဲ့ တူတယ်..။ ဘတ်နဲ့ ယွန် ဈေးကျလို့မှ အဲဒိကုန်ပစ္စည်းတွေ ဈေးမရသေးဘူးဆိုရင်တော့ အဲဒိဈေးသည် ရိုက်သတ်ပစ်ဖို့ပဲရှိတော့တယ်…..။
နိုင်ငံတော်က ဘာလုပ်ချင်လဲဆိုရင် တစ်ဦးချင်းရဲ့ အသားတင်ဝင်ငွေ GDP လားမသိဘူးခေါ်တာ အဲ့ဒါကို မြှင့်ချင်နေတာပါ။
အရင် ၅ သောင်းနှင့် အလုပ်ဝင်နေတဲ့လူ ၁၀၀ဝ ဈေးတုန်းက ဒေါ်လာ ၅ဝ ဘဲ ရတယ်။ အခု ၆၀ဝ လောက်ကျတော့ ဒေါ်လာ ၉ဝ ပတ်ချာလည် နားရောက်လာပြီ။ အကယ်၍ ၁ ဒေါ်လာ တန်ဖိုး ၅၀ဝ ဆိုရင် ဒီမှာ မြန်မာငွေ ၅ သောင်းနဲ့ အလုပ်လုပ်နေတဲ့လူတွေဟာ တစ်လ ဒေါ်လာ ၁၀ဝ ရတော့မှာပါ။
နိုင်ငံခြားမှာက ဒီဝင်ငွေအချိုးနဲ့ဘဲ နှိုင်းယှဉ်တော့ အစိုးရကလည်း ဒီဟာ လိုက်လုပ်တာနေမှာပေါ့ဗျာ။ တစ်ခြားအများကြီး ပြောစရာ ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် ပွိုင့်ပိုတက်အောင်လို့ နောက်မှ post တင်မယ်နော်
post တင်ပေး ပါ။ကျွန်တော်တို့ လဲ သိသလောက်နဲ့ ပြောနေရတာဆိုတော့
သိတဲ့လူတွေ ဝင်ပြောပေးတော့ ဗဟုသုတ ပိုရတာပေါ့။ ကျေးဇူးပါ။
လူကလေး တယ်စွမ်းပါလား။GDP ရယ် GNP ရယ်တွက်တဲ့ ပုံသေနည်းနဲ ့တော့ ပို ့စ်မတင်ဖို ့တောင်းပန်ပါရစေ။ဘာလို ့လဲ ဆိုတော့ ပုံသေနည်း ကစာအုပ်ထဲမှာဘဲရှိပြီးတော့ လက်တွေ ့မှာ ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းတွေ ကသန်းရွှေနှင့်အပေါင်းအပါများ ဖင်ခုထိုင်ထားလို ့ပါ။
ငွေလဲနှုန်း ဆိုတာက ကျတာ တက်တာ ထက်ငြိမ်နေဖို ့က အရေးကြီးတာ။ နှုန်းတစ်ခု မှာ ကြာကြာငြိမ်နေမှ စီးပွားရေးတွေလဲ တည်ငြိမ် လာမှာပေါ့။ ဒါကြောင့် နိုင်ငံ ရဲ ့စီးပွားရေးကို ထိန်းကွပ်တဲ့နေရာမှာ ငွေလဲနှုန်းတည်ငြိမ်ရေးကို အမြဲစဉ်းစားနေကြတာပေါ့။ စီးပွားကောင်းတဲ့နိုင်ငံတွေကိုလေ့လာ ကြည့်ရင် ငွေလဲနှုန်းအပြောင်းအလဲကို ၃ % ကနေ ၅% ထဲမှာပဲ ပြောင်းလဲမှုထိန်းထားတာ။ မြန်မာ နိုင်ငံမှာတော့ ငွေလဲနှုန်းက မငြိမ်တော့ သွင်းကုန် တွေကို ကျဈေးနဲ့ ဝယ်သွင်းလဲ ဘယ်တော့ ပြန်တက်မလဲဆိုတဲ့ မရေရာ မှုတွေကြောင့် ဈေး မလျှော့ပေးကြသေးဘူး။ တစ်ချို့ပစ္စည်းဆိုရင် ဈေးတောင်ပိုတက်လာသေးတယ်။ ကွန်ပြူတာပစ္စည်း ဆိုတာက တော့ လပိုင်း အတွင်းအသစ် ပေါ်တတ်တဲ့ပစ္စည်းဆိုတော့ ဈေးကျမှာပေါ့။ မရောင်းရရင် နောက်ပေါ်တဲ့ပုံစံသစ် တင်ဖို ့ခက်တာပေါ့။
ငွေလဲနှုန်းတည်ငြိမ် မှု ရှိလာရင်တော့ ဈေးကွက်ယှဉ်ပြိုင်မှု အရ မလျှော့ လို ့မရတော့ဘူး။ ကုန်သည် ရဲ့ သဘော ကတော့ များများ မြတ် လေကြိုက်လေပဲ။ မလျှော့ ရင် ရှုံးတော့ မယ် ဆိုမှသာ လျှော့ကြမှာ။ ငွေလဲနှုန်း အတက်အကျ မြန် တဲ့ အချိန်က တော့ လောင်း ကစားဆန်ဆန် စီးပွားလုပ်တဲ့သူတွေ အတွက် အကြိုက်တွေ ့မယ်ထင်တယ်။ Hit and run စီးပွားရေးလုပ်ပေါ့။ အခန် ့မသင့်တော့ ရှိတာကုန်ရော။
ငွေဈေးကြောင့် ပို့ကုန် တင်ပို့တဲ့ အပိုင်းမှာလည်း အခက်အခဲ အများကြီးရှိ မှာပေါ့နော်။
နိုင်ငံခြားက လခစားတော့ မကိုက်ဘူးပေါ့
မြန်မာနိုင်က လူတွေအတွက်တော့ ကောင်းတာပေါ့
ဒေါ်လာဈေးကျလို့ .. ဒေါ်လာနဲ့ကျပ်တန်ဖိုး အညီညှိပေးရတဲ့ ကုန်ပစ္စည်း ဈေးသက်သာမယ်ထင်လား .. ဝေးသေးတယ် … ။ ဟိုးတလောက ထရိတ်ဒါးမှာ ဘူဖေး ဆယ့်ခြောက်ဒေါ်လာပဲ ကုန်ခဲ့တယ် …. အဲ့ဒီတုန်းက တဒေါ်လာ ကိုးရာသာသာ … အခုစားမလို့ အင်ကွာရီအရင်လုပ်တာ … နှစ်ဆယ့်သုံးဒေါ်လာဖြစ်သွားပြီတဲ့လေ … အဲ့လိုလေးတွေ လိုတိုးပိုလျှော့ လုပ်လုပ်နေကြတာ … ။
ဘူဖေး ၂၃ ဒေါ်လာဆို.. ကျုပ်တို့ဆီမှာတော့.. ပုဇွန်ဂဏန်းအပြင်.. လော့ဘ်စတာပါ… စားလို့ရနေပြီ…။
Thailand ( မဟာချိုင် ဧရိယာ) မှာ BBQ – Seafood ဘူဖေး ( baht 150~200) အမုန်းဆွဲပြီး ဗုန်းကျဲ။
သဂျီးတို့ ဌာနေနဲ့ ယဉ်ပေါင်တန်း နိုင်တဲ့ … မြန်မာ့ ကုန်ဈေးနှုန်း ကွ …
မြန်မာနိုင်ငံကဝင်ငွေနဲ့ USကကုန်ဈေးနှုန်းနဲ့တော့ ဟုတ်နေပါပြီ
” ဒီနေ့မြန်မာနိူင်ငံရဲ့ ကုန်ဈေးနှုန်းဟာ ပြည်တွင်းထွက်ကုန်က လွဲရင် ကျန်တဲ့ အရာများက စကာင်္ပူထက် ဈေးကြီးနေပါပြီ ”
ကျွန်တော် ဉာဏ်မှီသလောက်လေး ပို့စ်တစ်ခု ရေးလိုက်ရပါတယ်။ http://myanmargazette.net/63973/uncategorized-other/copypaste
နိုင်ငံခြားကတင်သွင်းတဲ့ ကုန်ပစည်းတန်ဖိုးကျပေမယ့် ပြည်တွင်းထုတ်ကုန်တွေ ဈေးမကျပါဘူး..။
ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစရိတ်တွေများနေပြီး လုပ်ငန်းများရှင်သန်ရပ်တည်ဖို့ ခက်ခဲ့ပါတယ်..။
အဓိကစားကုန် ဆန် ဈေးမကျ၊ အိမ်ခြံမြေဈေးနှုန်းတွေမကျလို့ အခြေခံလူတန်းစားများနဲ့ လူလတ်တန်းစားများ ကြပ်တည်းမြဲ ဖြစ်ပါတယ်..။